'प्रधानमन्त्रीले रुउला झै गरे, प्रचण्डले सबैलाई खुसी पारे '
पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति मुलुकको निकासका लागि दलहरसँग सामुहिक छलफल गरे । मुख्य रुपमा राष्ट्रपतिले के विषयमा छलफल गरे भन्ने विषयमा केन्दि्रत रहेर राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति मुलुकको निकासका लागि दलहरसँग सामुहिक छलफल गरे । मुख्य रुपमा राष्ट्रपतिले के विषयमा छलफल गरे भन्ने विषयमा केन्दि्रत रहेर राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : राष्ट्रपतिसामु भएको छलफलपछि के निचोड आयो ? सबै नेताहरुले आ-आफ्नो भनाइ राखे । राष्ट्रपतिले पनि मुलुकको बिग्रदो अवस्थाको बारेमा राख्नु भयो । निचोडअघि जस्तै सहमति गरी संवैधानिक निकास निकाल्ले । संक्रमणकालबाट पार लगाउने भन्ने कुरा भयो, निचोड ठोस केही भएन । राष्ट्रपतिले सहमतिमा जाने कुरा गर्नु भयो दलहरु पूरानै अडानमा दोहोर्‍याएका हुन ? राष्ट्रलाई निकास नदिने हो र सबै दलहरु आ-आफनै अडानमा हुने हो भने नेपाल अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । मुलुक संकटमा छ संवैधानिक निकायहरु खाली हुँदैछन् ।
संसद छैन, स्थानीय निकायमा अधिकारीहरु छैनन् । दलीय सहमतिबाट नै निकास निकाल्ने भन्ने कुरा भयो । छलफलमा सहभागी केही राष्ट्रपति सक्रिय हुनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि गरेका हुन र ? त्यस्तो कसैले गरेन । मैले नै बरु राजा वीरेन्द्रको कुरा उठाएको थिए । त्यती बेला राजा संवैधानिक थिए, दलहरु मिल्न नसके राजालाई सक्रिया हुनु पर्छ भनेपछि त्यो दुर्गती बनाउने काम भयो । सबै दलहरु सहमति गरेर राष्ट्रपतिलाई लौ यसरी जानुस भनेपछि त्यसरी राष्ट्रपति जानु पर्छ भन्ने कुरा गरेको हुँ । राष्ट्रपति सक्रिय बनाउनु उचित हुन्न भन्ने कुरा भयो । भित्र बैठकको छलफल हेर्दा तपाईलाई के लाग्यो ? राष्ट्रको यो भयानक अवस्था देखेर सबै चिन्तित छन् । राष्ट्र नै असफल नै हुन लाग्यो । सधै अनिणिर्त हुनु हुन्छ, सत्तामा बसेकाहरुले सत्ता मै बस्नु हुन्न र सत्ता बाहिरकाहरु पनि सत्ता कै लागि लाग्नु हुन्न भन्ने कुरा भए । सहमति कुराले मात्र होइन व्यवहारमा देखाउनु पर्‍यो । सबैले संविधान बन्न नसकेको कुरा गरे मैले त संघीयता र सत्ता कै कारणले संविधान नबनेको भने । विपक्षीदलहरु निकासका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्, एमाओवादीले चुनाव, संविधान, संघीयतामा सहमति गर्‍यौ भन्छ, यी कुराका बीच केही नयाँ कुरा निष्कियो ? दलहरु सत्तामा बस्ने र लम्बाउने कुरा गर्छन । त्यो भन्दा पनि कसैले सरकारबाट राजीनामा दिएर सहमति गर्नुपर्छ भने । कसैले संविधानसभाको नै चुनाव गर्नुपर्छ भने,संसदको चुनाव, संविधानसभा पुनस्थापनाको कुरा पनि भयो । सबै दलका नेताहरुले आ- आफ्नो कुरा राखे । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाड्नु पर्छ भन्दा त्यहाँ उपस्थित पुष्पकलम दाहाल कुन मुद्रमा थिए ? दाहाल बोलेर सबैलाई खुशी पार्ने गर्छन । कार्यान्वयन पक्षमा दाहाल बदनाम नै भइसकेका छन् । सहमति गरी प्रधानमन्त्री र दाहाल सबै राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा नै गरे । राजीनाको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले चै के भने ?
प्रधानमन्त्री के भन्थ्ये सुरुवामा कसैले सहयोग गरेन मैले राम्रो गर्न खाजेको थिए भनेर गुनासो गरे पछि मलाई एकछिन पनि बस्न मन छैन म हरेक मिनेट टेन्सनमा विताइरहेको हुन्छ भनेर झण्डै रुउला झै गरि बोले । सहमति भए म अहिले नै यहीनेर राजीनामा दिन्छु पनि भने । म त मुखाले मान्छे तपाईले बजेट पनि ल्याउन सक्नु भएन, चुनाव पनि गर्न सक्नु भएन तपाईलाई एक छिन पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन राजीनामा दिनुहोस् भनदिए । निकास निस्कन सक्छ त, कहिलेसम्म ? राष्ट्रपति आफै सक्रिय हुन खोजेका होइन् । दलहरुको सत्ता लिप्स र आ-आफ्ना स्वार्थमा लागेर मुलुकलाई निकास दिन नसकेको अवस्थामा नेताहरु सुझावको लागि हो । यो सुझाव कार्यान्वयन होला त ? सहमति भए हुन्छ नभए आन्दोलन गरेर सत्ताबाट हटाउनु नपरोस भन्ने केही नेताहरुको भनाइ छ । निर्णायकमा रुपमा संविधानको ४ पार्टी नै ठेकेदार भए । आज मिली सक्यो भोलि मिल्यो भन्दै नक्कली कुरा गरेर समय खाने काम भयो । अन्य सभासदलाई विवादितमा छलफल गर्नबाट बञ्चित गरियो । Comments